आज २०७७ भदौ २ गते मंगलवार, तपाइको राशिफलमा भाग्य कस्तो छ ? - Filmy News Portal Of Nepal
आज २०७७ भदौ २ गते मंगलवार, तपाइको राशिफलमा भाग्य कस्तो छ ?
मेष राशि : व्यपारमा सोचेभन्दा राम्रो आम्दानी हनेछ भने जागिरमा तनावको समय देखिन्छ । लागानि गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ तर सतर्क भएर विचार गरेर गर्नु राम्रो हुनेछ । सामान्य स्वास्थ्य समस्या हुनेछ
वृष राशि : नँया जागिर पाउने वा जागिरमा पदोन्नति तथा सरुवा हुने सम्भावना देखिन्छ । घर परिवारमा मन रमाउनुका साथै नँया व्यत्तिसँगको भेटले मन प्रसन्न रहने छ ।
मिथुन राशि : दाजुभाइ दिदिवैनी सँगको सम्वन्धमा मधुरता छाउनुका साथै विदेशयात्रा वा स्वदेश आउन सकिन्छ । आर्थिक लाभको समय छ भने फसेको पैसा वा अचल धन आउने छ ।
कर्कट राशि : काममा वाधा आउने छ घर परिवारमा कसैको स्वास्थ्यमा समस्या हुने कारणले गर्दा मनमा खिन्नता छाउन सक्छ । व्यपारमा केहि मध्यम हुनेछ । मांगलिक कर्यहुने सम्भावना देखिन्छ ।
सिंह राशि : भाग्यले साथ दिनेछ भने भाग्यमा रोकिएको वस्तु प्राप्त हुनसक्ने छ । अचल सम्पत्ति किन वेच गर्न सक्ने समय छ । अकाल्पनिक धन आगमन हुन सक्नेछ तर स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या भने हुने
कन्या राशि : अपरझट र अकाल्पनिक धन वा जागिरमा खुसिको कुरा सन्न पाउन सकिनेछ । दाम्पत्य जीवनमा मधुरता छाउनुका सार्थ अविवाहित व्यत्तिहरुको विवाह हुन सक्नेछ समय भएकाको ।
तुला राशि : दाम्पत्य जीवन वा प्रेम सम्वन्धमा सामान्य मन मुटाव हुन सक्छ सतर्क रहनु होला वहुमुल्य वस्तु हराउन सक्ने छ । व्यपारमा भने राम्रो धन आगमन होला । राजगारमा पदोन्नतीको सम्भावना छ ।
वृश्चिक राशि : शत्रु वृद्धिभएर जानेछन् भने शत्रुको कारण महत्वपूर्ण काममा वाधा आउने छ । घर परिवारमा पनि मन मुटावको सम्भावना देखिन्छ । अध्यन क्षेत्रमा भने मन लाग्नेछ ।
धनु राशि : अध्यक्षेत्रमा सफलता हात पर्नुका साथै विदेश जान पाउन सक्ने समय देखिन्छ । साथीभाइ सँगको भेटले मन प्रसन्न हुनुका साथै साथी सँगमिलेर गरेको काममा सफलता हात पर्ला ।
मकर राशि : आमाको स्वास्थ्यलाइ लिएर समस्यामा पर्न सकिने छ । दउड धुप धेरै हुन सक्छ । सारिरिक थकानले सताउने छ भने आर्थिक हानिको समय देखिन्छ । सन्तान सुख पाइने छ ।
कुम्भ राशि : विदेश क्षेत्रवाट हुने काम वा आउने धन मा समस्या देखिन सक्नेछ । तर कृषि क्षेत्र वा विउ विजनको क्षेत्रमा सफलता हत पर्ने दखिन्छ । मांगलिक कार्यमा सरिक हुन पाइने छ ।
मीन राशि : अचल सम्पत्तिको किन वेच हुन सक्नेछ । जागिरमा प्रसम्सा प्राप्त हुनुका साथै पदोन्नतीको सम्भावना छ । यात्रा गर्दा सतर्क रहनु होला अन्यथा समास्यामा पर्न सकिन्छ ।
१. मेष राशि : यो श्रेणीमा सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा मेष राशि छ । जो राशि अन्य सबै राशिभन्दा उर्जावान मानिन्छ । यो राशिका मानिसहरु सधैं सक्रिय रहन्छ, रोक्नु यीनिहरुको स्वभामा हुँदैन् । यदी कसैले यो राशिका मानिसहरुलाई दिक्क बनाउँछ भने उनीहरुले त्यसको वास्ता गर्न छाडिदिन्छन् ।
२. बृश्चिक राशि: बृश्चिक राशिका मानिसहरु समर्पित र इमान्दार हुन्छन् । साथै यस राशिका व्यक्तिहरुको भित्र विद्रो ही भावना पनि प्रमुखताका साथ हुन्छ । जो मानिसहरु योग्य हुन्छन्, उनीहरुसँग यस राशिका व्यक्ति इमान्दारी निभाउँछन । तर, जो व्यक्तिहरु खुद धो केबाज हुन्छन् ती व्यक्तिहरुले भने यस राशिका व्यक्तिबाट सदैव सा वधान रहनु जरुरी हुन्छ ।यो राशिका मानिसहरु धेरै भावु क पनि हुन्छन् । जसकारण कहिलेकाँही यीनिहरुलाई सहन मुस्कि ल पनि हुन्छ । बृश्चिक राशिका मानिसहरुमा भविश्यका सं भावित घट नाबारे थाहा पाउने अ द्भुत क्षमता हुन्छ ।